Taylor Lopes ツ Blog – kombiyuutarada & Technology Information
25 August 2017 Taylor Lopes	laanta, horumar, caato, sayid, isku dar, moodel, sii deyn	1 comment
Ku rakib mPDF adiga oo aan lahayn Composer-ka serverka – wararka PDF la PHP
mPDF The abuuraa PDF ka CSS / HTML la qalooca waxbarasho hooseeyo. Fikradda halkan waa in laga dhigo mPDF shaqo iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo muusikada serverka. Composer ayaa loo isticmaali doonaa gudaha waxaana loo diri doonaa goor dambe serverka.
18 August 2017 Taylor Lopes	curiyay, mpdf, PHP, warbixinno	1 comment
Xalinta “Tani waa wax laga naxo / 404 Khalad lama helin” ka dib markii la rakibo “zend-expressive”
La shaqeynta qalabka dhexe, Maqaalkan waxaan ku xallin doonaa dhibaatada “Tani waa wax laga naxo / 404 Khalad lama helin” ka dib markii la rakibo “zend-expressive”.
10 August 2017 Taylor Lopes	naxdin leh, curiyay, muujinta, los / basepath, dhexda, PHP, dadweynaha, zend, zend-expressive	1 comment
Ctrl + C e Ctrl + V galaysa Windows e VM Linux ma Virtual Box
Sida Copy / dhaji dhexeeya Windows Desktop iyo Debian virtualized? Xalka ugu cad noqon lahaa si loo soo dajiyo ah “daro Guest” samayn Oracle VM VirtualBox, laakiin waxa ku saabsan marka ay abuuraa qaladka “Ku guuldareysatay inay u qotomiyey vboxadd adeegga”?
28 July 2017 Taylor Lopes	marti dheeri ah, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, sanduuqa dalwaddii, vm, daaqadaha	9 comments
automatic typescript badbaado isku duwidda ee Visual Studio Code
In this post aan xallin doonaan laba dhibaato: 1) amarka “TSC” Waxaa la ma aqoonsan yahay in terminal isku dhafan ee code VS, e 2) isku duwidda xogta aanu si toos ah u shaqeeyaan marka lagu badbaadinayo file “.TS” (Ku qor qoraalka showga).
14 July 2017 Taylor Lopes	angular.js, node.js, TS, TSC, typescript, code studio muuqaal ah, vs code	ka tag faallooyinka
Sidee si aad u hesho Certification Zend PHP
kooban A iyo account suubban ee sida aan ku sameeyey si aad u hesho Engineer Zend Certified PHP - ZCPE.
28 March 2017 Taylor Lopes	php shahaado, imtixaanka, PHP, imtixaanka, zcpe, zend, zend shahaado injineer php	16 comments
Configuring DDNS inuu isku shaandheyn via modem + router
Ha illoobin No-IP iyo DynDNS! Aad router oo uu ka shaqeeyo hab buundada iyo reserved DDNS la DNS-O-Matic.
28 January 2017 Taylor Lopes	cabsi, asus, buundo, ddns, dns-o-matic, cillad la'aan, dyndns, xorriyadda, modem, nat, no-ip, router, farsamada	4 comments
Kordhi size disk ee VirtualBox ah
Laga soo bilaabo Windows a 10, sida in ay ballaariso disk ee a virtualized Ubuntu Linux (.vdi) isticmaalaya Oracle VM VirtualBox? Eeg sida in 2 tallaabooyinka!
11 December 2016 Taylor Lopes	kordhin disk, kordhinta booska, gparted, hd, modalhd, ubuntu, vb, vboxmanage, vdi, Boostada, vm	21 comments
WordPress: ka saar buugga URL-ka dib u-qoristiisa .htaccess
Sida si toos ah loogu helo tusaha asalka u ah barnaamijka martigeliyaha haddii WordPress loo habeeyay inuu u shaqeeyo sidii URLs saaxiibtinimo?
7 December 2016 Taylor Lopes	htaccess, htdocs, dib u qor, url saaxiibtinimo, Wampserver, WordPress, www, Xampp	ka tag faallooyinka
Ku rakib ama cusboonaysii Java-ka Ubuntu
Marabtaa inaad Java ku rakibto Ubuntu hab dhaqameed iyo amaan aamin leh 4 Talaabooyinka? Waa tan hab dhakhso leh oo tan lagu sameeyo iyada oo aan la adeegsan kaydinta qayb saddexaad.
19 November 2016 Taylor Lopes	cusboonaysiinta, rakibo, java, Linux, ubuntu, cusboonaysiinta	ka tag faallooyinka
Sidee si aad u hesho Certification Zend PHP kooban A iyo account suubban ee sida aan ku sameeyey si aad u hesho Engineer Zend Certified PHP - ZCPE. Introdução A ideia não é falar sobre as vantagens (ama ma) isagoo shahaado a. Waxaan rabaa in aan wadaagno aan waayo-aragnimo, o que talvez ajude out...
automatic typescript badbaado isku duwidda ee Visual Studio Code In this post aan xallin doonaan laba dhibaato: 1) amarka "TSC" Waxaa la ma aqoonsan yahay in terminal isku dhafan ee code VS, e 2) isku duwidda xogta aanu si toos ah u shaqeeyaan marka lagu badbaadinayo file ".TS" (Ku qor qoraalka showga). Introdução Apenas para contextualizar, o Ty...
Copyright © 2022 taylorlopes.com tan Oct 2012, 3.110.689 helitaanka